Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) သောက်သုံးခြင်း၏အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများ
ပင်မစာမျက်နှာ > Pyrroloquinoline ကွီနုန်း (PQQ)
Cofttek သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ စျေးကွက်တွင် ၀ င်ရောက်ခဲ့ပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များကြောင့်လူသိများသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောကျဆကျတှဲ ၎င်းသည် gluten free ဖြစ်ပြီးဘုံဓာတ်မတည့်ခြင်းပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်မတူကွဲပြားသောအမျိုးမျိုးသောဓာတ်မတည့်ရောဂါခံစားနေရသူများသည်သူတို့၏စိတ်ငြိမ်သက်မှုပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိဘဲဤဖြည့်စွက်ဆေးကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ အဆိုပါ Cofttek PQQ ဖြည့်စွက်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် Pirroloquinoline Quinone စျေးကွက်တွင်လက်ရှိရရှိနိုင်ဖြည့်စွက်။ အကယ်၍ သင်သည်သက်သတ်လွတ်စားရန်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက PQQ Energy ဖြည့်စွက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့မှဝယ်ယူရန်အကြံပြုလိုပါသည် Cofttek.
Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) ဆိုတာဘာလဲ။
pyrroloquinoline quinone ဘာလုပ်သလဲ။
CoQ10 ကိုဘယ်အချိန်မနက် (သို့) ညဘယ်အချိန်မှာယူသင့်သလဲ။
QQ သည် CoQ10 တွင်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
CoQ10 မှာ quinine ရှိသလား။
အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကစျေးကွက်ချွတ် quinine ယူခဲ့တာလဲ
coenzyme Q10 ၏အကောင်းဆုံးပုံစံကဘာလဲ။
Co Q 10 ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘာလုပ်သလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်ကြောင့် Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) လိုအပ်သည်။
သင် mitochondria တိုးမြှင့်နိုင်ပါသလား?
PQQ quinine လား
Pyrroloquinoline Quinone disodium ဆား (PQQ) သည်အဘယ်နည်း။
coQ10 နှင့် ubiquinol ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။
PQQ သည် CoQ10 ထက်ပိုကောင်းသလား။
pyrroloquinoline quinone သည် quinine ကဲ့သို့တူညီပါသလား
သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် PQQ ကိုသောက်နိုင်သလား။
ဆီးချိုရောဂါအတွက် PQQ လုံခြုံမှုရှိပါသလား။
PQQ antioxidant ဆိုတာဘာလဲ။
ဗီတာမင် PQQ ဆိုတာဘာလဲ။
PQQ 20 ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
ဘယ်အစားအစာတွေမှာ PQQ ပါလဲ။
အဘယျသို့အစားအစာများ mitochondria တိုးပွါး?
အစာရှောင်ခြင်း mitochondria တိုးပွါးပါသလား
အဘယ်အရာကိုလေ့ကျင့်ခန်း mitochondria တိုးမြှင့်?
ပျက်စီးသွားသော mitochondria ကိုသင်ပြင်နိုင်ပါသလား။
အဘယျသို့ဖြည့်စွက် mitochondria တိုးမြှင့်?
Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) ကိုအသုံးပြုသည်။
Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) အကျိုးကျေးဇူးများ။
Bulk ရှိ Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) အမှုန့်များကိုဝယ်ယူရမည်နည်း။
Pyrroloquinoline Quinone (သို့) PQQ သည်အပင်များ၌ပါ ၀ င်သောဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတဆေးကဲ့သို့သောဘက်တီးရီးယားများစွာနှင့်ဆဲလ်တစ်ခုတည်းဖြစ်သည့် eukaryotes ဖြစ်သည်။ PQQ သည်သဘာဝမိခင်နို့နှင့်အချဉ်ပေါက်သောပဲပုပ်များ၊ ကီဝီ၊ ပါယာယာ၊ ဟင်းနုနွယ်ရွက်၊ parsley၊ တိရိစ္ဆာန်များအပေါ်သုတေသနပြုခြင်းသည်မလုံလောက်သော PQQ သို့မဟုတ် PQQ ပြတ်လပ်မှုကိုအားနည်းသောကိုယ်ခံအားတုန့်ပြန်မှု၊ ကြီးထွားမှုအားနည်းခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောမျိုးပွားမှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုလျှော့ချခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်ထားသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာသုတေသီများက Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) ဗီတာမင်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကပြုလုပ်ခဲ့သောသုတေသနပြုချက်အရ Pyrroloquinoline Quinone သည်ဗီတာမင်အရည်အသွေးများနှင့်အတူအာဟာရတစ်ခုဖြစ်ပြီး Co-factor သို့မဟုတ် Enzyme Booster အနေဖြင့်စွမ်းအင်နှစ်မျိုးအကြားပြောင်းလဲခြင်းပါဝင်သည်။ မျိုးစိတ်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင် PQQ သည်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိ quinoproteins များနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးလွတ်လပ်သောအစွန်းရောက်များကိုဖယ်ရှားရန်၎င်းတို့နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည်။ သုတေသနတစ်ခုအရ quinoproteins သည် anti-oxidant အနေဖြင့် Vitamin-C ထက်အဆ ၁၀၀ ပိုမိုထိရောက်သည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများအရ PQQ သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ mitochondria အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ဆယ်လူလာဇီဝြဖစ်ပျက်ခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤအရေးကြီးသောအချက်အလက်များသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း Pyrroloquinoline quinone လူကြိုက်များမှုရုတ်တရက်မြင့်တက်လာစေခဲ့သည်။
pyrroloquinoline quinone (PQQ) သည်အပင်ကြီးထွားမှုနှင့်ဘက်တီးရီးယား cofactor ဖြစ်ခြင်းအပြင် mitochondria ကို oxidative stress မှကာကွယ်ပေးပြီး mitochondriogenesis ကိုအားပေးသည်။
ယခုအချိန်အထိမည်သည့်အထက်နှင့်အောက်ကန့်သတ်ချက်များကိုမဆိုသတ်မှတ်နိုင်သေးသည် Pyrroloquinoline ကွီနုန်း (PQQ) သောက်သုံးသော။ သို့သော်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများမှပေါ်လွင်သောရလဒ်များအနေဖြင့်၎င်းဒြပ်ပေါင်းသည် ၂ မီလီဂရမ်အထိနည်းသောဆေးများကိုသောက်သောအခါဇီဝတက်ကြွမှုဖြစ်လာသည်။ သို့သော်ယနေ့ခေတ်တွင်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်ချက်အများစုကို ၂၀ မီလီဂရမ်မှ ၄၀ မီလီဂရမ်အထိရနိုင်သည်။ ၎င်းသည်စိတ်ချရသောအကွာအဝေးဖြစ်သည်။ PQQ ကိုအများအားဖြင့်တောင့်တင်းသည့်ဆေးတောင့်များမှရရှိနိုင်ပါသည်၊ လူများကိုဗိုက်ဆာစေသည့်ဆေးကိုသောက်ရန်အကြံပေးသည်။ သို့သော်အသုံးပြုသူများကိုတစ်နေ့လျှင်2mg သောက်သုံးသောထက်ကျော်လွန်။ မသွားကြဖို့အကြံပြုသည်။
CoQ10 ကိုအိပ်ရာဝင်ချိန်နှင့်နီးကပ်စွာသောက်ခြင်းသည်အချို့သောလူများတွင်အိပ်မပျော်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်၊ ထို့ကြောင့်နံနက်ခင်းသို့မဟုတ်နေ့လည်ခင်းတွင်သောက်သုံးခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ CoQ41 ဖြည့်စွက်ဆေးများသည်သွေးပေါင်ချိန်၊
Coenzyme Q10 (CoQ10) သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သဘာဝအရထုတ်လုပ်သော antioxidant ဖြစ်သည်။ သင်၏ဆဲလ်များသည်ကြီးထွားမှုနှင့်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် CoQ10 ကိုအသုံးပြုသည်။
လှုံ့ဆော်မှုများကိုတုန့်ပြန်သောအားဖြင့် mitochondria သည်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန် fusion / fission cycles ဖြစ်သည်။ ဒါဟာ mitochondrial ဒိုင်းနမစ်၏ပလပ်စတစ်အာရုံခံသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးဘို့လိုအပ်ကြောင်း hypothesize မှထို့ကြောင့်ယုတ္တိဖြစ်ပါတယ်။
Coenzyme Q10 သည် Ubiquinones ဟုခေါ်သော ၀ တ္ထုများနှင့်သက်ဆိုင်သောဓာတု quinine နှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သင် quinine နှင့်မတည့်ကြောင်းသင်သေချာစွာသိပါက CoQ10 ဖြင့်နေ့စဉ်ဖြည့်စွက်ခြင်းမပြုမီသင့်ဆရာဝန်နှင့်ပြောဆိုသင့်သည်။
အမေရိကန်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦး စီးဌာန (FDA) ကပြင်းထန်သောဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများနှင့်သုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောသေဆုံးမှုများကြောင့်ကွိုင်နင်ပါ ၀ င်သည့်ဆေးဝါးထုတ်ကုန်များကိုဖယ်ရှားရန်အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။ စျေးကွက်ထဲမှလုံခြုံမှုမရှိသော၊ ခွင့်ပြုချက်မရသောမူးယစ်ဆေးဝါးများအားလုံးကိုဖယ်ရှားရန်ပိုမိုလုပ်ဆောင်မှု၏လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Ubiquinol သည် သွေးထဲတွင် CoQ90 ၏ 10% နှင့် စုပ်ယူနိုင်ဆုံးပုံစံဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ubiquinol ပါဝင်သော ဖြည့်စွက်အားဆေးများကို ရွေးချယ်ရန် အကြံပြုထားသည်။
CoQ10 သည်နှလုံးကျန်းမာရေးနှင့်သွေးသကြားဓာတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတိုးတက်စေရန်၊ ကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသရေးနှင့် migraines ၏ကြိမ်နှုန်းကိုလျှော့ချရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ဦး နှောက်နှင့်အဆုတ်ရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ဓာတ်တိုးပျက်စီးမှုကိုလည်းလျှော့ချနိုင်သည်။
စိတ္တဇ။ မဟုတ်ရင် methoxatin ဟုလူသိများသည့် Pyrroloquinoline quinone (PQQ) သည်ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော၊ Redox-Cycling orthoquinone ဖြစ်သည်။ အစပိုင်းတွင် methylotropic ဘက်တီးရီးယားများ၏ယဉ်ကျေးမှုများမှခွဲထုတ်ထားသည်။ …သို့သော်တိရိစ္ဆာန်တစ်ခုလုံးတွင် PQQ သည်သွေးကြောအတားအဆီးကိုဖြတ်ကျော်နိုင်ခြင်းမရှိချေ။
လူတို့သည်အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှသူတို့၏ ဦး နှောက်သည်ပျက်စီးမှုရင်းမြစ်များစွာကိုတိုက်ခိုက်ရန်မဖြစ်မနေဖြစ်လာသည်။ အချို့သောပျက်စီးမှုအရင်းအမြစ်များသည်လူ့ ဦး နှောက်အပေါ်အနည်းဆုံးအကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမရှိသလောက်ကိုမှတ်ပုံတင်သော်လည်းအချို့သောပျက်စီးမှုများသည်အာရုံကြောပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းနှင့်သွေးကြောများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောတိုးတက်သောဒဏ်ရာများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသောအချက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလူတို့သည် ဦး နှောက်ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုစိုးရိမ်လာကြရာသုတေသနပြုခြင်း၊ ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာများသိသိသာသာပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ သုတေသီများသည်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဒြပ်ပေါင်းအမျိုးမျိုးတို့၏လူ့ ဦး နှောက်၏ကျန်းမာရေးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက်လေ့လာမှုများကိုအဆက်မပြတ်ပြုလုပ်နေသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသုတေသီများနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်များကိုစိတ် ၀ င်စားစေသည့်ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုမှာ Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါး၌၊ Pyrroloquinoline Quinone နှင့်ပတ်သက်သောသိသင့်သိထိုက်သောအရာအားလုံးကိုဆွေးနွေးထားသည်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်၊ အကျိုးကျေးဇူးများ၊ သောက်သုံးသောကန့်သတ်ချက်များနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ။ ဒီတော့ဆက်ဖတ်ပါ
အဆိပ်ထိတွေ့မှုကိုလျှော့ချပါ။ mitochondria ကို oxidative stress မှကာကွယ်ပေးသောအာဟာရများကိုပေးပါ။
mitochondrial ATP ထုတ်လုပ်မှုကိုအထောက်အကူပြုသောအာဟာရများကိုအသုံးပြုပါ။
ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းသည် mitochondria's Krebs သံသရာအတွက်အရေးကြီးသောသင်၏အောက်စီဂျင်ပမာဏကိုတိုးပွားစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်စွမ်းအင်ပိုမိုအသုံးပြုလေလေ၊ ၎င်းသည်ဝယ်လိုအားနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် mitochondria ပိုမိုထုတ်လုပ်ရန်သူ့ဟာသူအားတွန်းအားပေးလိမ့်မည်။
PQQ ဟုလည်းလူသိများသော Pyrroloquinoline quinine သည် redox cofactor နှင့်အများအားဖြင့်အစားအစာအပင်များတွင်တွေ့ရသော polyphenolic ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဆဲလ်များ၏ cytoplasm တွင်တွေ့နိုင်ပြီးဓာတ်ပြုမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်ဓာတ်တိုးခြင်းများကိုကူညီသည်။
ကွိုင်နင်းသည်သစ်ပင်အခေါက်မှထွက်လာသောခါးသောဒြပ်ပေါင်းဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်တောင်အမေရိက၊ ဗဟိုအမေရိက၊ ကာရစ်ဘီယံကျွန်းများနှင့်အာဖရိကအနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းများတွင်အများဆုံးတွေ့ရသည်။ ကွိုင်နင်းကိုမူလကငှက်ဖျားရောဂါတိုက်ဖျက်ရန်ဆေးပညာအဖြစ်တီထွင်ခဲ့သည်။
ကြိုတင်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောမေးခွန်းလွှာ (PQQ, တစ်ခါတစ်ရံကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအကဲဖြတ်ခြင်းမေးခွန်းလွှာအဖြစ်ရည်ညွှန်း) သည်သူတို့၏အတွေ့အကြုံ၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဘဏ္standingာရေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြေဆိုရန်အလားအလာရှိသောတင်ဒါတင်သွင်းသူများအတွက်မေးခွန်းများစွာကိုဖော်ပြထားသည်။
Pyrroloquinoline quinone (PQQ) သည်ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော quinone ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးခိုင်ခံ့သော anti-oxidant capacity ရှိသည်။ ယခင် PQQ-deplet အစားအစာကိုကျွေးခဲ့သည့်ကြွက်များတွင်ယခင်လေ့လာမှုအရ PQQ ဖြည့်စွက်ပြီးနောက်သွေးရည်ကြည် triglyceride (TG) ၏မြင့်မားသောအဆင့်များလျော့နည်းသွားကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ယခုအထိပြုလုပ်ခဲ့သည့်သုတေသနပြုချက်အရ PQQ သည်သတ်မှတ်ထားသောကန့်သတ်ချက်များအတွင်း၌ခန္ဓာကိုယ်ကကောင်းစွာသည်းခံနိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သို့သော်သတ်မှတ်ထားသောသောက်သုံးသောဆေးပမာဏထက်ကျော်လွန်ပါကခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်ငိုက်မျဉ်းခြင်းကဲ့သို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်လုံခြုံစိတ်ချရသောတစ်နေ့လျှင် ၄၀ မီလီဂရမ်ကိုမှီဝဲရန်နှင့် 40 မီလီဂရမ်သောက်သုံးသောဆေးများထက်ကျော်လွန်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ PQQ သည်ခန္ဓာကိုယ်ကကောင်းစွာသည်းခံတတ်သည်ဟုလူသိများသော်လည်းသင့်တွင်မတည်ရှိသေးသောအခြေအနေများရှိပါကဆရာဝန်မသောက်မီဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။
CoQ10 သည်ရထား၏အမြန်နှုန်းကိုတိုးတက်စေသော supercharger တစ်ခုနှင့်တူသည်။ PQQ သည်သင်၏ရထားသို့အပိုကားများကိုထပ်ထည့်ရန်အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်သောဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်တူသည်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင် CoQ10 သည်သင်၏စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအမြန်နှုန်းကိုတိုးတက်စေပြီး PQQ သည်သင်၏ရထားသို့ထပ်တိုးစွမ်းရည်များတည်ဆောက်ပေးနေသည်။
CoQ10 ၏စံသတ်မှတ်ထားသောစံသတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။ လေ့လာမှုများအရ CoQ10 ဆေးများကိုအရွယ်ရောက်သူများအနေဖြင့်မီလီဂရမ် ၅၀ မှ ၁၂၀၀ မီလီဂရမ်အထိအသုံးပြုခဲ့ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတစ်နေ့တာအတွင်းအကြိမ်များစွာခွဲစိတ်ခဲ့သည်။ ပုံမှန်ပုံမှန်ဆေးထိုးသည်မီလီဂရမ် ၁၀၀ မှ ၂၀၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။
Antikoagulants ။ CoQ10 သည် Warfarin (Jantoven) ကဲ့သို့သောသွေးဖြန်းဆေးများကိုထိရောက်မှုနည်းစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သွေးခဲခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးစေသည်။
သို့ဖြစ်လျှင် Q10 သည်သွေးမှဆဲလ်များနှင့်တစ်ရှူးများသို့ကူးသွားသောအခါ၎င်းသည်၎င်း၏ဇီဝစွမ်းအင်ဖြစ်သော ubiquinone သို့ပြန်လည်ပြောင်းလဲသွားသည်။ Ubiquinol ၏ Q10 ပုံစံသည်အလွန်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီး Q10 ဆေးတောင့်ထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အတွက်များစွာစျေးကြီးသည်။
Ubiquinol ပမာဏသည်သွေးပလာစမာတွင်ပြန်လည်စတင်လာသည်နှင့်အမျှဖြည့်စွက်ဆေးစတင်ပြီးငါးရက်မြောက်သောနေ့၌ပင်များစွာသောလူတို့သည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုလက္ခဏာများကိုလျှော့ချသင့်သည်။ များသောအားဖြင့်နှစ်ပတ်မှသုံးပတ်အတွင်းသင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ Ubiquinol ပမာဏသည်အကောင်းဆုံးအဆင့်သို့ရောက်ရှိလိမ့်မည်။ များစွာသောသူတို့သည်ဤအချိန်အတွင်းစွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှုကိုခံစားရလိမ့်မည်။
ကိုယ် ၀ န်နှင့်နို့တိုက်ချိန်များတွင် CoQ10 ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လုံခြုံမှုမရှိသေးပါ။ သင့်ဆရာဝန်၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲသင်ကိုယ်ဝန်သို့မဟုတ်နို့တိုက်နေပါက CoQ10 ကိုမသုံးပါနှင့်။
PQQ ဟုလည်းလူသိများသော Pyrroloquinoline quinine သည် redox cofactor နှင့်အများအားဖြင့်အစားအစာအပင်များတွင်တွေ့ရသော polyphenolic ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ PQQ ကိုဆယ်လူလာစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် mitochondrial ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို oxidative stress မှကာကွယ်ရန်အတွက်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်စာအဖြစ်စားသုံးနိုင်သည်။
အားကောင်းသောအာဟာရ PQQ သည်နှလုံးပျက်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးလေ့လာချက်အသစ်အနေဖြင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေရေးနှင့်ကုထုံးတွင်ထုတ်ဝေသောလက်တွေ့သုတေသနအသစ်အရမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရဖြစ်သော Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) သည်နာတာရှည်နှလုံးပျက်ကွက်ခြင်း (CHF) ကိုကာကွယ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များအရ PQQ နှင့်အထူးသဖြင့်ကိုယ်ဝန်နှင့်နို့တိုက်နေစဉ်ကာလအတွင်း WD မှထုတ်လွှတ်သော Hepatic lipotoxicity ပရိုဂရမ်းမင်းမှကလေးများအားကာကွယ်ပေးပြီးနောက်မျိုးဆက်တွင် NAFLD ၏တိုးပွားလာသောကပ်ရောဂါကိုနှေးကွေးစေနိုင်သည်။
PQQ ၏ဤ Anti- ဆီးချိုရောဂါသက်ရောက်မှုများ, PQQ တစ်ရှူး LPO တားစီးဒါပေမယ့်လည်းသွေးရည်ကြည်အင်ဆူလင်နှင့် HDL အဖြစ်ဆယ်လူလာ antioxidants တိုးမြှင့်အဖြစ်၎င်း၏ antioxidative ဂုဏ်သတ္တိများကထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
သင်၏ Mitochondria ကိုမြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်း ၁၀
ဆိုဒါ၊ အဖြူရောင်ပေါင်မုန့်နှင့် pastries စသည့်သန့်စင်ပြီးသော carbs များကိုလွှင့်ပစ်ပါ။
ညတိုင်း ၈ နာရီအိပ်စက်ခြင်းကို ဦး စားပေးပါ။
နေ့စဉ်အနည်းဆုံးမိနစ် ၃၀ လှုပ်ရှားပါ။
မှိုပါးသောချောကလက်ကဲ့သို့ resveratrol နှင့်အတူဓါတ်တိုးကြွယ်ဝသောအစားအစာများကိုစားပါ။
Omega-3s နှင့် alpha-lipoic acid တို့၏အရင်းအမြစ်များကိုစားပါ။
Pyrroloquinoline quinone (PQQ) သည်လူ့နို့တွင်မကြာသေးမီကတွေ့ရသော redox cofactor ဖြစ်သည်။ PQQ သည် mitochondria များကိုထိရောက်စွာတားဆီးပေးသောဓာတ်တိုးစိတ်ဖိစီးမှု - သွေးဆောင် lipid peroxidation၊ ပရိုတင်းကာဗွန်နိုင်းဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် mitochondrial အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကွင်းဆက်အားပိတ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
PQQ သည်အမျိုးမျိုးသောအစားအစာများတွင်တွေ့ရသောသဘာဝဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် antioxidant အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးကျန်းမာသော mitochondrial လုပ်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့သည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြည့်စွက်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Pyrroloquinoline quinone သို့မဟုတ် PQQ သည်မကြာသေးမီကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောအပင်များအစားအစာများတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသောဗီတာမင်ဒြပ်ပေါင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို B Vitamins များလူသားများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပုံနှင့်ဆင်တူသည့်ဘက်တီးရီးယားများအတွက် cofactor အဖြစ်ပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့သည်။ PQQ သည် ဦး နှောက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသော antioxidant နှင့် B-vitamin ကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုရှိသည်။
နေ့တိုင်း PQQ နည်းနည်းစားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ၎င်းကိုဟင်းနုနွယ်ရွက်၊ ငရုတ်ကောင်း၊ သစ်သီးဖျော်ရည်၊ tofu၊ natto (စိမ်ပဲ)၊ လက်ဖက်စိမ်းနှင့်လူ့နို့ကဲ့သို့သောအစားအစာများစွာတွင်တွေ့ရသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အစားအစာမှ PQQ အမြောက်အများမရရှိပါ။ တစ်နေ့လျှင် ၀.၁ မှ ၁.၀ မီလီဂရမ် (mg) သာရှိသည်။
ဤအဓိကအာဟာရဓာတ်အချို့သည် L-carnitine နှင့် creatine တို့ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည် mitochondria သို့စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏အစားအစာတွင်မြက်စားအမဲသား၊ ဘီနီ၊ ဥ၊ ကြက်၊ ကြက်၊ ပဲ၊ အခွံမာနှင့်အစေ့များကိုထည့်ခြင်းဖြင့်နှစ်မျိုးလုံးရနိုင်သည်။
လေ့လာမှုအရအစာရှောင်ခြင်းသည်အခြေခံအဆီဇီဝြဖစ်စဉ်ဖြစ်သည့် fatty acid oxidation ကိုတိုးစေနိုင်သည့် peroxisomes, organelle အမျိုးအစားနှင့် mitochondrial ကိုညှိနှိုင်းစေသည်။
လေ့လာမှုအသစ်အရလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း - အထူးသဖြင့်မြင့်မားသောပြင်းထန်သောကြားကာလလေ့ကျင့်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်လမ်းလျှောက်ခြင်းစသည်တို့ - ဆဲလ်များသည်၎င်းတို့၏စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သော mitochondria နှင့်ပရိုတင်းတည်ဆောက်ခြင်းရိုင်ဗိုဇုမ်းများအားပရိုတင်းများပိုမိုစေပြီးဆဲလ်အဆင့်တွင်အိုမင်းခြင်းကိုရပ်တန့်စေသည်။ ။
ပျက်စီးမှုကိုတန်ပြန်ရန် mitochondria များသည်နျူကလိယနှင့်ဆင်တူသည့်ကောင်းစွာပြုပြင်ထားသောလမ်းကြောင်းများရှိသည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားပြီး၎င်းမှာအောက်ခြေရှိ excision repair (BER)၊ မတိုက်ဆိုင်သောပြုပြင် (MMR)၊ single-strand break ပြုပြင်ခြင်း (SSBR) တို့ဖြစ်သည်။ microhomology-mediated အဆုံးပူးပေါင်း (MMEJ) နှင့်ဖြစ်ကောင်း homology recombination ။
အမြှေးပါး phospholipids, CoQ10, microencapsulated NADH, l-carnitine, α-lipoic acid နှင့်အခြားအာဟာရများပါ ၀ င်သည့်ခံတွင်းဖြည့်စွက်ဆေးများသည် mitochondrial လုပ်ဆောင်မှုကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်နှင့်နာတာရှည်ရောဂါများခံစားနေရသောလူနာများတွင်မဖြေရှင်းနိုင်သောပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။
Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) အသုံးပြုမှုများ
Pyrroloquinoline ကွီနုန်း (PQQ) အစပိုင်းတွင်ဗီတာမင်ဖြစ်ရန်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်နောက်ထပ်သုတေသနက၎င်းကိုအစားအစာနှင့်နို့တိုက်သတ္တဝါများတစ်သျှူးများတွင်တွေ့ရသောဗီတာမင်မဟုတ်သောဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သို့သော်မည်သည့်သုတေသနကမျှ၎င်း၏နို့တိုက်သတ္တဝါများစုစည်းမှုကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း PQQ ၏နာနိုဂရမ် ၁၀၀ မှ ၄၀၀ ခန့်ကိုလူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်နေ့တိုင်းဖွဲ့စည်းသည်ကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်အရေးကြီးသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ဤပမာဏသည် PQQ လုပ်ဆောင်ရန်သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်သောအမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထောက်ပံ့ရန်မလုံလောက်ပါ။ ထို့ကြောင့်လူသားများသည် PQQ ကိုအစားအသောက်ဖြည့်စွက်ဆေးများအဖြစ်မကြာခဏစားသုံးရန်အကြံပေးသည်။
PQQ တွင်မရှိသောအာဟာရဓာတ်သည်ကြီးထွားမှုကိုလျှော့ချစေရုံသာမကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုပါလျော့နည်းစေသည်။ အလားတူပင်များစွာသောလေ့လာမှုများ PQQ ကြီးထွားမှုအချက်နှင့် mitochondrial biogenesis နှင့်ဆက်စပ်ပါပြီ။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်လူ့ခန္ဓာကိုယ်က PQQ ကနေအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တယ်၊ PQQ သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော REDOX အေးဂျင့်ဖြစ်ကြောင်းလူသိများပြီး Self-oxidation နှင့် polymerization ကိုတားဆီးသည်။
Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) အကျိုးကျေးဇူးများ
Pyrroloquinoline Quinone ကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းစိတ်ဝင်စားမှုများပြားလာပြီး၎င်းဒြပ်ပေါင်းသည်အကျိုးကျေးဇူးများစွာနှင့်ဆက်နွယ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏အရေးအပါဆုံး Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) အကျိုးကျေးဇူးများကိုကြည့်ပါ။
① PQQ သည်တိုးတက်လာသောယေဘူယျစွမ်းအင်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်
Mitochondria သည်ဆဲလ်များအတွင်းရှိတည်ရှိပြီးသေးငယ်သော organelles များဖြစ်ပြီးမကြာခဏဆိုသလိုဆဲလ်စွမ်းအင်များအဖြစ်အစာမှစွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်သည့်အခါဆဲလ်အင်အားကြီးများအဖြစ်ရည်ညွှန်းလေ့ရှိပြီးဆဲလ်များလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်စွမ်းအင်ကိုပေးသည်။ Pyrroloquinoline Quinone သည် mitochondria ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်စေပြီးဆဲလ်များအတွင်းစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ဆဲလ်များအတွင်းစွမ်းအင်တိုးပွားလာခြင်းကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဆီသို့ရောက်ရှိသွားသည်။ အားစိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်စွမ်းအင်နည်းခြင်းတို့ကိုသင်မကြာခဏကြုံတွေ့ရပါက PQQ ဖြည့်စွက်ခြင်းကသင့်စွမ်းအင်အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်။ (၁) Pubmed - Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) ၏ဆိုးကျိုးများ
Pyrroloquinoline Quinone သည်ဆယ်လူလာလမ်းကြောင်းများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည်။ ၎င်းသည် cranial တစ်သျှူးအတွင်းရှိအာရုံခံဆဲလ်များနှင့်အာရုံကြောများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဦး တည်စေသည်။ ထို့ကြောင့် PQQ သည် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ NGF ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်မကြာခဏဆက်စပ်မှုရှိသဖြင့်အသက်အရွယ်နှင့်ဆိုင်သောအခြေအနေများကိုကုသရန် PQQ ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုမကြာခဏသတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။
လေ့လာမှုတစ်ခုအရ PQQ စားသုံးမှုသည်လူများ၏အိပ်စက်ခြင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ လေ့လာမှုကရှစ်ပတ်အတွင်းပါဝင်သူများအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ၈ ပတ်ကြာပုံမှန်စားသုံးသူများသည်အိပ်စက်အနားယူနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ PQQ စားသုံးမှုသည်ပုံမှန်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်ပြတ်တောက်စေသောစိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းကိုလျော့နည်းစေသည်ဟုလေ့လာမှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤဒေသတွင်သုတေသနများပိုမိုလိုအပ်သော်လည်းပဏာမသုတေသနသည် PQQ စားသုံးမှုကိုအိပ်စက်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာချိတ်ဆက်ထားသည်။
Q PQQ သည် Oxidative Stress ကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်အလုံးစုံသုခချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
PQQ သည် anti-oxidant ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်လူသိများသည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ C-reactive protein နှင့် IL-6 အဆင့်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းသည်ရောင်ရမ်းမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ၄ င်း၏ oxidative ဂုဏ်သတ္တိများသည် PQQ သည်နာတာရှည်ရောဂါများဖြစ်သည့် carcinomas နှင့် neurodegenerative ရောဂါများဖြစ်သော oxidative stress ကိုတားဆီးရာတွင်ထိရောက်သောတိုက်ထုတ်သူတစ် ဦး ဖြစ်စေသည်။ PQQ သည် free radicals ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော oxidative ပျက်စီးမှုကိုလျော့နည်းစေပြီးဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
Co CoQ10 နှင့်ပေါင်းစပ်။ PQQ Memory Function ကိုတိုးတက်စေသည်
PQQ စားသုံးမှုသည်စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေပြီး၎င်းသည်အပြန်အလှန်အားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသိမြင်မှုစွမ်းရည်နှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးတက်စေရန် ဦး ဆောင်နေသည်။ PQQ သည်မှတ်ဥာဏ်ကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုလေ့လာရန်သုတေသနလေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ PQQ သည် CoQ10, Co ဇင်နိုက်နှင့်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကိုမြှင့်တင်ပေးပြီးဆဲလ်များကိုပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ PQQ သည် CoQ10 နှင့်ပေါင်းပြီးမှတ်ဉာဏ်လုပ်ဆောင်မှုတိုးတက်လာသည်။
Q PQQ ၏အခြားအကျိုးကျေးဇူးများ
အထက်ဖော်ပြပါအကျိုးကျေးဇူးများအပြင် PQQ သည်လက်ရှိပြုလုပ်နေသောသုတေသနပြုခြင်းနှင့်အခြားအကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်းပေးသည်။ သာဓကအားဖြင့်ပဏာမသုတေသနသည် PQQ စားသုံးမှုသည်ကလေးမွေးဖွားမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်သည် Pyrroloquinoline Quinone ကိုအကြီးစားတွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်ပါဝင်သည့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဖြည့်စွက်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါက PQQ အမှုန့်များဖြင့်သင့်အားကုန်ကြမ်းကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူအားသင်ရှာဖွေရမည်မှာထင်ရှားသည်။ အရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်ယုံကြည်ရသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအားရှာဖွေခြင်းသည်အောင်မြင်သောစီးပွားရေးတစ်ခုထူထောင်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
သငျသညျမှရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင် Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) ကိုဝယ်ပါ အမှုန့်အမြောက်အများ, စျေးဝယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာ Cofttek ဖြစ်ပါတယ်။ Cofttek သည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဆေးဝါးဇီဝဓါတုဗေဒလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး“ အရည်အသွေးအခြေခံ၊ ဖောက်သည်ပထမ၊ ရိုးသားသော ၀ န်ဆောင်မှု၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူသူများအားထောက်ပံ့ရန်ခွင့်ပြုပေးသောကုမ္ပဏီသည်ပြီးပြည့်စုံသောစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည် Cofttek သည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များကိုတရုတ်၊ ဥရောပ၊ အိန္ဒိယနှင့်မြောက်အမေရိကရှိဆေးဝါးကုမ္ပဏီများသို့တင်ပို့သည်။ ကုမ္ပဏီမှပေးသော PQQ အမှုန့်သည် ၂၅ ကီလိုဂရမ်အသုတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသင့်ထုတ်ကုန်များစွာကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ Cofttek တွင်အတွေ့အကြုံရှိသောစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပထမတန်းစား R&D အဖွဲ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုသင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီရရှိနိုင်မည်ကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ Pyrroloquinoline Quinone အမြောက်အများကိုသင်ဝယ်ယူလိုပါက cofttek ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
(၁)လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်သောအမျိုးသားများအတွက်အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် Mitochondrial ဇီဝဖြစ်စဉ်၏ညွှန်းကိန်းများ Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) ဖြည့်စွက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
(2) စိတ်ထိခိုက် ဦး နှောက်ဒဏ်ရာအပေါ် pyrroloquinoline quinone ၏ neuroprotective အကျိုးသက်ရောက်မှု
(3) pyrroloquinoline quinone ၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများအပေါ်လေ့လာမှုများအတွက်မကြာသေးမီတိုးတက်မှု
(၄) Antioxidant ဖြည့်စွက်ချက် Pyrroloquinoline Quinone Disodium Salt (BioPQQ ™) သည်သိမှုဆိုင်ရာ Functions များအပေါ်သက်ရောက်မှု။
(13) phosphatidylserine (ps) ကိုသောက်ခြင်း၏အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများ။
ရိုးရှင်းတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကို သူဖြေနိုင်ရင်ကောင်းမယ်။ PQQ တွင် quinine ပါဝင်မှုရှိမရှိ နှစ်ကြိမ်မေးခဲ့ပြီး မေးခွန်းကို တစ်ခါမှ မဖြေပါ။
ငါ pqq ကိုချစ်။ ငါက 2yrs နီးပါးအဘို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါ့အဘို့ကစွမ်းအင်ကိုတိုးမြှင့်။ စိတ်ရှုပ်ထွေးသောနည်းဖြင့်မဟုတ်ဘဲယေဘုယျအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ခြင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကိုမြှင့်တင်ခြင်း။ ငါက 10mg ubiquinol w 20 သို့မဟုတ် 100 mg ကိုနေ့စဉ်၎င်းကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်တော်အကြံပြုပါတယ်
ငါတစ်နေ့လျှင် 40 မီလီဂရမ်ယူပါ။ ကျွန်ုပ်၏စွမ်းအင်သည်တစ်နေ့လုံးတစ်သမတ်တည်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည် ashwagandha, magnesium နှင့် l-theanine တို့နှင့်အတူကျွန်ုပ်၏အိပ်ရေးအရည်အသွေးကောင်းမွန်စေသည်ဟုခံစားမိသည်။
Pyrroloquinoline Quinone သည် Floxing မှမည်သို့ကုသနိုင်သည်ကိုလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည် mitochondria အသစ်၏ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးဆဲလ်ပြုပြင်ခြင်းအတွက် CoQ10 နှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ ငါစွမ်းအင်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံစိတ်ဓာတ်ကြီးမားသောခြားနားချက်ကိုသတိပြုမိသောအခါ